नरिवल खाँदा हुने यी १२ फाइदा बारे जान्नुहोस् – Annapurna Daily
On Sep 19, 2021 1,759
एजेन्सी । हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक फल हो नरिवल । नरिवल खाँदा स्वादिलो मात्र होइन शरिरलाई धेरै फाइदा पनि गर्छ । नरिवलमा भिटामिन ‘ए’, कम भए पनि प्रोटिन, एमिनोएसिड र भिटामिन ‘बी’को मात्रा प्रशस्त पाइन्छ। नरिवल खान मात्र होइन तेल बनाउन, खाद्द पदार्थ बनाउन र आर्युवेदिक औषधि बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। थुप्रै गुणले सम्पन्न नरिवलको पानी पनि फाइदाजनक छ ।
उल्टी, पेटको अल्सर, ग्यास्ट्रिक आदि रोगका लागि यसको पानी लाभकारी मानिन्छ भने कब्जियत, झाडाबान्ता, पिसाब रोग, अनिद्रा आदिमा औषधिको रूपमा लिइन्छ । यस्तै नरिवल खाँदा पनि हाम्रो शरिरलाई धेरै फाइदा गर्छ । नरिवल खाँदाका फाइदाहरु: १. शरिरको तौललाई सन्तुलन राख्न मद्दत गर्दछ, २. शरीरमा उर्जा विकास गर्ने, ३. प्रतिरक्षा प्रणालीको सुधार गर्ने, ४. कोलइस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्दछ, ५. पाचनिक्रयामा सहयोग पुर्याउछ
६. छालालाई चम्किलो राखिराख्न सहयोग गर्छ, ७. हाडजोर्जी तथा दाँतका लागि फाइदाजनक, ८. मुटुलाई तन्दुरुस्त राख्छ, ९. चाउरीपना हटाउन मद्दत गर्छ, १०. हरमोनलाई नियमित क्रियामा राख्दछ ११. मेटावोलिजम बढाउँछ, १२. उचित मात्रामा सेवन गरेमा थाइराइडलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्छ ।
यो पनि,विभिन्न गेडागुडी मिसाएर टुसा उमारेको गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि यति धेरै फाइदाजनक ! सबैले जानीराखौं, टुसा उमारेका गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक मानिन्छ । विभिन्न गेडागुडी मिसाएर टुसा उमारेको खाद्ययबस्तु प्रोटिनको खानी हो । किनभने, यसमा थुप्रै किसिमका गेडागुडी मिसाइएका हुन्छन् ।
टुसा उमारेका गेडागुडीमा पशस्त मात्रामा प्रोटिन, सूक्ष्म पोषकतत्त्व, क्याल्सियम, भिटामिन २० गुणा बढ्न जान्छन् । त्यसैले सय रूपैयाँको सुक्खा क्वाँटी ल्याएर टुसा उमारेर खाने हो भने ४ सय रूपैयाँसम्मको फाइदा लिन सकिन्छ । क्वाटी जीवन्त खाना हो, जुन पचाउन पनि निकै सजिलो हुन्छ । यत्तिकै खाँदाभन्दा टुसा उमारेर खाँदा पचाउन सजिलो हुन्छ । दाल, गेडागुडीको सेवन गर्दा शरीरमा ग्यास उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर, क्वाटी बनाएर खाएपछि शरीरमा ग्यास बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ ।
यस्ता छन् टुसा उमारेका गेडागुडी खानुका फाइदा: बालबालिकालाई कुपोषण तथा गर्भवती महिलाको शरीरमा प्रोटिनको कमी नहोस् भनेर क्वाटी खान दिने गरिन्छ । प्रोटिनको कमी नभएपछि महिलालाई रक्तअल्पता पनि हुन पाउँदैन । गर्भवतीमा रगतको कमी नभएपछि भ्रूण वा पेटको बच्चा पनि राम्रो हुन्छ । गर्भवतीमा मात्र नभएर सुत्केरी भएपछि पनि क्वाटीको सेवनले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
यसको रस खाँदा पर्याप्त मात्रामा शरीरमा चाहिने क्याल्सियम, प्रोटिन प्राप्त हुन्छ, त्यसकारण सुत्केरी महिलालाई ज्वानो तथा क्वाटीको रस खुवाउने हाम्रो जुन परम्परागत छ, त्यो एकदमै वैज्ञानिक छ । कोही व्यक्ति कुनै रोग तथा शरीरमा समस्यापछि तंग्रिन लागेका वेला पनि क्वाटीको रसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ । जो व्यक्ति शाहाकारी जीवनशैली अपनाउँछन्, माछा–मासु खाँदैनन्, उनीहरूका लागि क्वाटी अति उपयोगी हुन्छ , प्रत्येक साताको दुई–तीनपटक खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । यो पौष्टिकताले भरिपूर्ण भोजन हो ।
यसरी खाँदा थप लाभ: क्वाटीलाई विभिन्न तरिकाले पकाएर खान सकिन्छ । सुप बनाएर वा तरकारीका रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । क्वाटीलाई पिसेर पिठोमा मिलाएर बालबालिकाका लागि खाजा खाजा तयार गर्दा यसको पौष्टिकता एकदमै बढ्न जान्छ । टुसा उमारेको चना बालबालिकालाई खुवाइयो भने प्रोटिनको मात्र पर्याप्त हुन्छ । टुसा उमारेको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई जीवन्त खानेकुरा भनिन्छ । अन्य फाइदा: क्वाटी शक्तिवर्धक एवम् पौष्टिक आहार हो, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, कब्जियतको समस्या हटाउँछ ।